We.com.mm - ၂၀၁၈ ထိပျသီးတှဆေုံ့ပှဲကနေ စငျကာပူအတှကျ ဘယျလိုအကြိုးအမွတျတှထှေကျလာနိုငျမလဲ
သိကွတဲ့အတိုငျး ထိပျသီးတှဆေုံ့ပှဲကို စငျကာပူမှာပွုလုပျခဲ့တာဆိုတော့ …. အဲဒီအရေးက တကယျတမျးလကျရှိမှာအရမျးကွီးလေးတဲ့တာဝနျကွီးတဈခုပါ။ စငျကာပူအတှကျပေါ့လေ။ နှဈဖကျခေါငျးဆောငျတှေ နရေေးထိုငျရေး၊ သှားလာရေး အဆငျပွစေဖေို့အတှကျ အဖကျဖကျကတာဝနျယူရတယျ။ ပူးပေါငျးလုံခွုံရေးတှလေုပျရတယျ။ ခေါငျးဆောငျတှရေဲ့ကားတနျးတှသှေားရလာရအဆငျပွစေဖေို့အတှကျ အဓိကလမျးမတဈခြို့ကိုပိတျလိုကျရတယျ။ ဟျောတယျဝငျးတှကေို ပရိုကျဗိတျဧရိယာတှလေုပျလိုကျတယျ။ လုံခွုံရေးပိုတငျးကွပျတယျ။ အဲဒီအတှကျ နိုငျငံသားတှရေဲ့ မတ်ေတာပို့တာကိုခံရတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကိစ်စတော့မရှိ။ ဆှေးနှေးပှဲပွီးသှားပွီဆိုတာနဲ့ စငျကာပူနိုငျငံအတှကျ လကျဆောငျတှထေုနဲ့ထညျနဲ့စောငျ့ကွိုနပွေီလေ …။
နံပတျတဈ - ဒိတျဒိတျကွဲနှဈယောကျရဲ့ခရီးစဉျကိုလကျခံပေး၊ ဧညျ့တောကျခံပေးရတဲ့စားရိတျတှဟော ဒျေါလာသနျးနဲ့ခြီပွီး ကုနျကမြှုရှိတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒီရဲ့အကြိုးဆကျအဖွဈ စငျကာပူငှဈေေး ထိုးတကျသှားမယျ။
နံပါတျနှဈ - စငျကာပူအနနေဲ့ အမရေိကနျလုပျ F 35 မဟာဗြူဟာမွောကျဖိုကျတာလယောဉျတှအေုံနဲ့ကငျြးနဲ့ဝယျယူခှငျ့ရမယျ။ နောကျပွီး အရှတေ့ောငျအာရှမှာ တောငျကိုရီးယားပွီးရငျ အမရေိကနျလုပျ F 35 တှရှေိတဲ့ ဒုတိယအငျအားကွီးလတေပျကိုပိုငျဆိုငျလာမယျ။
နံပါတျသုံး - ဆှေးနှေးပှဲအပွီးမှာ စငျကာပူကို ဧညျ့သညျဝငျရောကျမှုပိုမြားလာမယျ။ ခေါငျးဆောငျတှတေညျးခဲ့တဲ့ မာရီနာဘေး ဟျောတယျအပွငျ ဆနျတိုဆာကြှနျးပျေါက ကာပီလာ ဟျောတယျတှဟော ကမ်ဘာ့ထိပျတနျးနံပါတျ ၁ ဟျောတယျဆိုပွီးဖွဈလာတော့မယျ။
ကားပှဲစားတှလေိုမြိုးပေါ့။ ရောငျးသူဝယျသူအလုပျဖွဈရငျ ကွားထဲကပှဲစားကအခြောငျအမွတျရ .. အဲ .. တဈခုတော့ရှိတာပေါ့ ..။ ပါးစပျလေးတော့စိုကျရတာပေါ့လေ။ တကယျတမျးနိုငျငံရေးဆိုတာလညျး စီးပှားရေးနဲ့လောဂဈြတူတူပါပဲ။ အကြိုးအမွတျမရှိရငျ ခွငျတောငျမရိုကျဘူးဆိုသလိုပေါ့ ..။
ဒါတှကေတော့ Summit 2018 အောငျအောငျမွငျမွငျပွီးသှားရငျဖွဈလာနိုငျတဲ့အကြိုးဆကျပေါ့။ Summit အနနေဲ့ဘယျလိုလာမလဲ၊ စငျကာပူရော မှနျးထားတဲ့တှကျကိနျးထဲပဲဝငျမလား၊ မှနျးခကျြနဲ့နှမျးထှကျမကိုကျဘူးလားဆိုတာကတော့ မကွာမီလာမညျမြှျောပေါ့လေ …။
၂၀၁၈ ထိပ်သီးတွေ့ဆုံပွဲကနေ စင်ကာပူအတွက် ဘယ်လိုအကျိုးအမြတ်တွေထွက်လာနိုင်မလဲ
သိကြတဲ့အတိုင်း ထိပ်သီးတွေ့ဆုံပွဲကို စင်ကာပူမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့လေ …. အဲဒီအရေးက တကယ်တမ်းလက်ရှိမှာအရမ်းကြီးလေးတဲ့တာဝန်ကြီးတစ်ခုပါ။ စင်ကာပူအတွက်ပေါ့လေ။ နှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေ နေရေးထိုင်ရေး၊ သွားလာရေး အဆင်ပြေစေဖို့အတွက် အဖက်ဖက်ကတာဝန်ယူရတယ်။ ပူးပေါင်းလုံခြုံရေးတွေလုပ်ရတယ်။ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ကားတန်းတွေသွားရလာရအဆင်ပြေစေဖို့အတွက် အဓိကလမ်းမတစ်ချို့ကိုပိတ်လိုက်ရတယ်။ ဟော်တယ်ဝင်းတွေကို ပရိုက်ဗိတ်ဧရိယာတွေလုပ်လိုက်တယ်။ လုံခြုံရေးပိုတင်းကြပ်တယ်။ အဲဒီအတွက် နိုင်ငံသားတွေရဲ့ မေတ္တာပို့တာကိုခံရတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိစ္စတော့မရှိ။ ဆွေးနွေးပွဲပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံအတွက် လက်ဆောင်တွေထုနဲ့ထည်နဲ့စောင့်ကြိုနေပြီလေ …။
နံပတ်တစ် - ဒိတ်ဒိတ်ကြဲနှစ်ယောက်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုလက်ခံပေး၊ ဧည့်တောက်ခံပေးရတဲ့စားရိတ်တွေဟာ ဒေါ်လာသန်းနဲ့ချီပြီး ကုန်ကျမှုရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီရဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ် စင်ကာပူငွေဈေး ထိုးတက်သွားမယ်။
နံပါတ်နှစ် - စင်ကာပူအနေနဲ့ အမေရိကန်လုပ် F 35 မဟာဗျူဟာမြောက်ဖိုက်တာလေယာဉ်တွေအုံနဲ့ကျင်းနဲ့ဝယ်ယူခွင့်ရမယ်။ နောက်ပြီး အရှေ့တောင်အာရှမှာ တောင်ကိုရီးယားပြီးရင် အမေရိကန်လုပ် F 35 တွေရှိတဲ့ ဒုတိယအင်အားကြီးလေတပ်ကိုပိုင်ဆိုင်လာမယ်။
နံပါတ်သုံး - ဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာ စင်ကာပူကို ဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုပိုများလာမယ်။ ခေါင်းဆောင်တွေတည်းခဲ့တဲ့ မာရီနာဘေး ဟော်တယ်အပြင် ဆန်တိုဆာကျွန်းပေါ်က ကာပီလာ ဟော်တယ်တွေဟာ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းနံပါတ် ၁ ဟော်တယ်ဆိုပြီးဖြစ်လာတော့မယ်။
ကားပွဲစားတွေလိုမျိုးပေါ့။ ရောင်းသူဝယ်သူအလုပ်ဖြစ်ရင် ကြားထဲကပွဲစားကအချောင်အမြတ်ရ .. အဲ .. တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့ ..။ ပါးစပ်လေးတော့စိုက်ရတာပေါ့လေ။ တကယ်တမ်းနိုင်ငံရေးဆိုတာလည်း စီးပွားရေးနဲ့လောဂျစ်တူတူပါပဲ။ အကျိုးအမြတ်မရှိရင် ခြင်တောင်မရိုက်ဘူးဆိုသလိုပေါ့ ..။
ဒါတွေကတော့ Summit 2018 အောင်အောင်မြင်မြင်ပြီးသွားရင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်ပေါ့။ Summit အနေနဲ့ဘယ်လိုလာမလဲ၊ စင်ကာပူရော မှန်းထားတဲ့တွက်ကိန်းထဲပဲဝင်မလား၊ မှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက်မကိုက်ဘူးလားဆိုတာကတော့ မကြာမီလာမည်မျှော်ပေါ့လေ …။
လူတှတေငျမက ခှေးတှပေါ ဝငျစားလို့ရတယျ၊ ဘဏျဝနျထမျးတှေ မဝငျရဆိုတဲ့ စားသောကျဆိုငျ
တဈရကျတညျးတှငျ Coronavirus ကွောငျ့ သဆေုံးသူ ၂၄၂ ဦး ရှိလာခဲ့သညျ့ တရုတျနိုငျငံ
“မုဒွာရဲ့ချေါသံ” ကို ထပျမံကွညျ့ရှုရမယျ့ အခှငျ့အရေးလာပါပွီ
လူရှဈဦးဒဏျရာရရှိခဲ့တဲ့ ခွောကျမိုငျခှဲ Market Place ကပေါကျကှဲမှု
Coronavirus ပြံ့နှံ့မှုက ခရီးသှားလုပျငနျးမြားစှာကို ဘီလြံနှငျ့ခြီသညျ့ ဆုံးရှုံးမှုဖွဈစခေဲ့